तपाईको यस्तो बानी, जसले निम्त्याउँछ मधुमेह | Radio Makalu 102.1 MHz Websoft University
तपाईको यस्तो बानी, जसले निम्त्याउँछ मधुमेह
मधुमेह अहिले आम रोग भइसकेको छ । अहिले कम उमेरकाहरु समेत यसका शिकार भएका छन् । मधुमेह किन लाग्छ त ?
मधुमेह मूख्यतः मेटाबोलिज्मको बिकारको कारण हुन्छ । मोटाबोलिज्म एक प्रकिया हो, जसले शरीरमा खानेकुरालाई उर्जामा परिवर्तन गर्छ । त्यस उर्जा हामी आफ्नो दैनिक कार्यका लागि प्रयोग गर्छौ । यसले शारीरिक बृद्धि, प्रतिरोधात्मक क्षमता र प्रजननका लागि खास सहयोग गर्छ ।
हामीले जे कुरा खान्छौ, त्यो पेटमा पुगेपछि एक प्रकारको इन्धनमा रुपान्तरण हुन्छ, जसलाई ग्लुकोज भनिन्छ । यो रक्त कोशिकाको माध्यामबाट शरीरको लाखौं कोशिकामा पुग्छ र उर्जाको रुपमा प्रयोग हुन्छ ।
पेटको पछिल्तिर एक ग्रन्थी हुन्छ, जसले इन्सुलिन उत्पादन गर्छ । त्यसैले ग्लोकोजलाई शरीरको कोशिकामा पुर्‍याउँछ । यदि उक्त ग्रन्थीले इन्सुलिन उत्पादन गर्न छाड्यो वा कम उत्पादन गर्न थाल्यो भने, त्यही अवस्थामा मधुमेह भएको भनिन्छ । यसरी ग्लुकोज उत्पादन भएपनि त्यो उर्जामा परिवर्तन हुँदैन ।
मधुमेह किन हुन्छ ? यसमा धेरै हदसम्म हामी स्वंम जिम्मेवार छौ । हाम्रो जीवनशैली, खानपान आदिको कारण मधुमेह हुन्छ । हाम्रो दैनिक जीवनमा गरिने कतिपय गल्ती मधुमेहको कारण बन्न सक्छ । के हुन् त त्यस्ता गल्ती
१. नास्ता नगर्नु
बिहान नास्ता नगर्नाले शरीरमा इन्सुलिनको मात्रा नियन्त्रण हुँदैन । त्यसैले ब्लड सुगर लेभल नियन्त्रण गर्नु मुश्किल हुन्छ ।
२. ढिलो खाना खानु
राती ढिलो खाना खाने र तुरुन्तै सुत्नाले तौल बढ्छ । यसले पनि ब्लड सुगरको सन्तुलन गडबड गरिदिन्छ, जसले मधुमेहको खतरा बढाइदिन्छ ।
३. सुगर ड्रिंक
चिनीजन्य पेयमा चिनीको मात्रा अत्याधिक हुन्छ, जसले शरीरमा क्यालोरी बढाइदिन्छ । यसबाट तौल बढ्छ र मधुमेहको खतरा हुन्छ ।
४. हेल्दी डाइट नलिनु
आफ्नो दैनिक खानामा अंकुराएको गेडागुडी, ड्राइ फुट्स, हरियो सब्जी आदि सामेल हुनुपर्छ । यदि उक्त कुराको कमी भएपनि पनि मधुमेहको जोखिम बढ्छ ।
दिनभर धेरै क्यालोरीयुक्त स्न्याक्स खानाले शरीरमा क्यालोरी बढी प्राप्त हुन्छ । यसले शरीरमा बोसो बढाउँछ र मधुमेह निम्त्याउँछ ।
६. खानापछि बिश्राम लिनु
अक्सर मानिस खाना खाइसकेपछि घन्टौ बस्छन् । यसले शरीरमा बोसो बढ्छ साथै मधुमेहको खतरा पनि ।
७. सलाद नखानु
दैनिक खानामा सलादको मात्रा सामेल गर्नुपर्छ । सलादमा फाइबर हुन्छ, जसले हाम्रो शरीरमा ब्लड शुगरको मात्रा नियन्त्रण गर्छ ।
कसरी नियन्त्रण गर्ने
– भोको पेट नबसौं । खानामा हरियो सब्जी, सलाद, सुप आदि सामेल गरौं ।
– चिनीजन्य खाद्यपदार्थको सेवन नियन्त्रित मात्रामा गरौं ।
– हरेक दिन एक घण्टा जति तिब्र गतिमा हिँड्ने गरौं ।
– समय तालिका मिलाएर पटक पटक खानेकुरा खाने गरौं ।
– भोजनमा रेशादा पदार्थलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।-अनलाइनखबर